Global Voices teny Malagasy » Palestina: Niteraka fanehoan-kevitra teo amin’ireo bilaogera ny daroka an’habakabaka Israeliana (2008) · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Aogositra 2019 14:44 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Palestina, Ady & Fifandirana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Politika, Tanora, Vaovao Mafana
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny 27 desambra 2008 ity adika eto ity)
Taorian'ny fiafaràn'ny fampitsaharana ady teo amin'i Israely sy ny Hamas , dia nitombo ny herisetra sy ny fifandonana teo amin'i Israely sy i Gaza. Namely an'i Gaza tamin'ny daroka an'habakabaka ny israeliana tamin'ilay antsoin'ny AFP  hoe “iray amin'ireo andro mihoso-drà indrindra nandritra ny ady naharitra taom-polo mahery tao Afovoany Atsinanana.” Hatramin'izao, eo amin'ny 210 ary mihamitombo ny isan'ny maty ao Gaza.
Tezitra tamin'ny zavatra hitany fa hetsika tsy misy ilavana azy avy amin'i Isiraely ny tontolon'ny bilaogy Palestiniana, izay ahitana ireo Palestiniana sy ireo mpanohana manerana izao tontolo izao. No Justice No Peace…The Big Picture, mpikambana iray manan-kaja ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Palestiniana, niteny hoe :
200 no maty, 750 naratra, noho ny inona? Noho ny balafomanga Qassam izay namono olona latsaky ny 10 tao anatin'ny 8 taona. Raha nisy ny fampiasan-kery tafahoatra, dia ity fanafihan'ny F-16 (karamaina amin'ny hetra dolara Amerikana) izany.
Amin'ny anaran'ny “fiarovan-tena” izany rehetra izany. Mba miangavy re! Fanafihana tsimifaditrovana izany, ary famonoana tsy misy dikany, ary, amin'Andriamanitra, rehefa manao fifidianana ianao ary miantso izany ho dingana demokratika, dia raiso amin'ny fomba sivilize ny vokatra, fa tsy amin'ny fanokana-monina an'i Gaza, amin'ny fitazonana fampindramam-bola, solika, herinaratra, fitaovam-pitsaboana, sambo mitondra fanampiana mahaolona, nanome baiko ho an'ireo mpanaramaso ny Firenena Mikambana mba tsy hiditra an'i Gaza ary manontany tena avy eo hoe nahoana no natifitra ny balafomanga vita tanana (tsy misy toro-lalana mazava na mety hiteraka fahasimbana goavana).
PalestineFreeVoice manipika  fa nampiasa fitaovam-piadiana iraisam-pirenena voaràra i Israely tamin'ny fanafihana ary nitatitra fa:
Ny Asabotsy mitataovovona, tamin'ny andian-daroka an'habakabaka voalohany, nikendry ny tranoben'ny governemantan'i Gaza ny Israeliana. Voamarina ny fisian'ny fahafatesana ary ao anatin'izany ny lehiben'ny Tafika polisy ao Gaza, Tawfiq Jabir, ny komandin'ny Sampan-draharahan'ny filaminana sy ny fiarovana ao amin'ny polisy ao Gaza, Ismail Al-Ja'bari sy ny governoran'ny distrikan'i Al-Wusta (afovoany) Ahmad Abu Aashur. Nilaza i Islam Shahwan, mpitondratenin'ny polisy Hamas fa namotika ny ankamaroan'ny foiben'ny polisin'i Gaza ny fanafihan'ny Israeliana ary nandritra ny lanonana fanomezana mari-pahaizana ho an'ny polisy no nitranga ny fanafihana Israeliana.:
Mpanoratra ao amin'ny Global Voices Bahrain, bint battuta, namoaka hafatra an-tsoratra  avy amin'ny namana iray ao Rafah:
Lahatsoratra avy amin'ny namana mpampianatra ao Rafah: “Nokapohin'izy ireo fanindroany i Gaza manontolo.” Maro amin'ireo maty no ankizy. “Nilaza tamiko ny mpiara-miasa amiko fa nahita faty 8 teny amin'ny arabe izy. Naka ny zanany velona izy, aty an-tsekoly aho amin'izao fotoana izao ary eny rehetra eny ny horohoro ao Gaza.
Efa manome antoka sahady ireo bilaogera Palestiniana fa hitarika ny tontolon'ny bilaogy hihetsika ity daroka an'habakabaka farany indrindra ity. Ali Abunimah, manoratra ao amin'ny The Electronic Intifada, nanamarika  fa misy ny fihetsiketsehana karakaraina manerana izao tontolo izao:
Antampon'ny hatezerana sy ny alahelo mavesatra tsapan'ny ankamaroan'ny olona tamin'ny famonoana faobe vaovao ataon'i Israely any Gaza, no misy ny fahatsapana fangidian-dela fa toa vitsy ny fomba ahafahana mamoaka izany amin'ny setriny ara-politika izay afaka manova ny fizotran-draharaha, mamarana ny fijaliana, ary hitondra ny rariny.
Saingy misy ireo fomba, ary fotoana hifantohana amin'izany izao. Efa naharay fanamarihana momba ny fihetsiketsehana sy ny hetsika firaisankina natao tany amin'ireo tanàna manerana izao tontolo izao aho. Zava-dehibe izany. Fa inona no hitranga rehefa miparitaka ireo fihetsiketsehana ary maty ny hatezerana? Mbola hanohy hamela ny Palestiniana any Gaza ho faty mangingina ve isika?
Mangataka firaisankina, firaisankina tena izy, amin'ny endrika hetsika ara-politika vonona sy maharitra ireo Palestiniana rehetra na aiza na aiza. Nanamafy izany androany ny One Democratic State Group any Gaza, satria “nantsoina ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena sy ny olona tia fahalalahana mba handray fepetra tsy misy hatak'andro amin'ny fomba rehetra azo atao mba hanery ny governemanta hampitsahatra ny fifampiraharahana diplomatika amin'ny Apartheid (Fanavakavaham-bolokoditra) Israely ary hanasazy azy.”
Hanohy hanolotra fandrakofana avy amin'ny bilaogera samihafa ny Global Voices. Jereo matetika ny pejy fandrakofana manokana momba ny daroka baomba ao Gaza  na misorata anarana ao amin'ny fahana RSS Palestina .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/08/16/142024/
 fiafaràn'ny fampitsaharana ady teo amin'i Israely sy ny Hamas: http://www.hindu.com/2008/12/20/stories/2008122052901600.htm
 antsoin'ny AFP: http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hGdOVX8wKfbGm3FAUNLxtM9TEPZw
 niteny hoe: http://nojustice-nopeace.blogspot.com/2008/12/gaza-massacre.html
 namoaka hafatra an-tsoratra: http://battutabahrain.blogspot.com/2008/12/air-strikes-on-gaza.html
 pejy fandrakofana manokana momba ny daroka baomba ao Gaza: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/2008-gaza-strip-bombings/
 misorata anarana ao amin'ny fahana RSS Palestina: https://globalvoicesonline.org/-/world/middle-east-north-africa/palestine/feed/